Ayuub Daacadnimadiisii Wuu Xajiyay | Farriinta Kitaabka
KU AKHRI Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Danish Digor Douala Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Frafra French Fulfulde (Cameroon) Georgian German Greek Greek Sign Language Greenlandic Guarani Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kabuverdianu Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Sorani Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Maltese Mam Manipuri Mapudungun Marathi Maya Mazahua Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndonga Nepali Ngabere Nias Nicaraguan Sign Language Norwegian Nzema Okpe Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Southern Greece) Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Sinhala Slovak Slovenian Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ilaahay hortiisa Shayddaanku daacadnimada Ayuub buu ka dooday. Haddaba Ayuub daacad buu Yehowah u sii ahaa
BINU’AADANKU haddii heer walba loo tijaabiyo weli Ilaahay daacad may u ahaan doonaan? Xitaa haddii ay daacadnimadooda xoolo u kordhin? Sheekadii Ayuub baa suʼaashaas lagu soo hadal qaaday loogana jawaabay.
Markay reer binu Israaʼiil Masar joogeen meesha maanta ah dalka Carabta waxaa degganaa nin Ayuub la dhaho oo Ibraahim qaraabo la ahaa. Waqtigaas malaaʼigihii baa samada Ilaahay hortiis ku ururay oo Shayddaankii baa isna gudahooda soo istaagay. Ilaahay hortooda wuxuu ku sheegay inuu addoonkiisa daacadda ah Ayuub ku kalsoon yahay. Weliba Yehowah wuxuu yiri in dhulka oo dhan lagu arkin nin sidiisa oo kale daacad u ah. Laakiinse Shayddaankii wuxuu ku adkaystay in Ayuub Ilaahay ugu adeego barakadiisa iyo ilaalintiisa keliya. Shayddaankii wuxuu yiri Ayuub Ilaahay wax xun buu ka sheegi doonaa haddii uu wixiisa oo dhan ka qaado.
Ilaahay wuu u oggolaaday Shayddaankii inuu Ayuub ka qaado xoolihiisa iyo carruurtiisa kaddibna caafimaadkiisa. Ayuub muusan ogeen inuu Shayddaanku waxyaalahan ka dambeeyay wuuna garan waayay sababta uu Ilaahay u yeelay inuu dhibaatooyinkan maro. Hase ahaatee Ayuub Ilaahay ka ma horjeedsanin.
Saddex saaxiib oo xun baa Ayuub soo booqday. Hadallo badan oo buugga Ayuub ku qoran bay kula hadleen. Nimankan waxay isku dayeen inay Ayuub ka dhaadhiciyaan inuu Ilaahay dembi qarsoon aawadiis isaga u ciqaabayo. Waxayna ugu sheekeeyeen inuunan Ilaahay addoommadiisa ku farxin oona kalsooni saarin. Ayuub fekradahooda qaldan wuu diiday. Si kalsooni leh buu u sheegay inuu daacadnimadiisa ilaa u dhinto haysan doono.
Haddaba Ayuub qalad buu galay. Waxaa muhim la noqotay inuu caddeeyo xaqnimadiisa. Nin dhallinyaro ah oo Eliihuu la yiraahdo oo dooddaas dhegeysanayay baa hadalkoodii ka qaybgalay. Eliihuu Ayuub buu canaantay waayo wuxuu qiimeyn waayay inay caddaynta sayidnimada Ilaah Yehowah aad uga muhimsan tahay in laysku ekaysiiyo qof xaq ah. Aad buuna u canaantay saaxiibbadii xumaa oo Ayuub.
Ilaah Yehowah fekradihii Ayuub wuu saxay. Yehowah wuxuu Ayuub u tilmaamay abuuristiisa cajaa’ibka leh. Tani waxay Ayuub ka fekersiisay yaraanta binuʼaadanka markii Ilaahay weynaantiisa la barbardhigo. Si kibir lahayn buu Ayuub u aqbalay sixidda Ilaahay. Yehowah wuu “raxmad badan yahay, naxariisna wuu leeyahay.” (Yacquub 5:11) Sidaa daraaddeed Ayuub wuu u soo celiyay caafimaadkiisii. Xoolihiisii u haysan jirayna laba jibbaar buu siiyay. Toban carruurna wuu ku barakeeyay. Waxaan aragnay inuu Shayddaankii binuʼaadanka ku dacweeyay inaysan Ilaahay daacad u ahaanayn haddii la tijaabiyo. Haddaba Ayuub baa jawaab siiyay markuu xajiyay daacadnimadiisa.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay buugga Ayuub.
Shayddaanka dooddee buu kiciyay oo Ayuub ku saabsanayd?
Maxay daacadnimadii Ayuub caddeysay?
ARRIMAHA UGU MUHIMSAN
Ayuub wuxuu ahaa ninka dunida ugu qumman oo qof sidiisa Ilaahay uga cabsada ma jirin waqtigaas. Shayddaanku wuxuu ku adkaystay in Ayuub Ilaahay ugu adeego siduu wax uga helo keliya. Markuu sidaas yeelay malaaʼigaha iyo binuʼaadanka dhammaantood buu isla waxan ku masabbiday. Saas darteed Shayddaanku wuxuu dood ka abuuray qummanaanta ay binuʼadanka Yehowah u leeyihiin. Tani waa qayb ka mid ah arrinta weyn uu Shayddaanka beertii Ceeden ka kiciyay. Arrintii ku saabsanayd sayidnimada Yehowah xaqnimadeeda iyo xaqa uu u leeyahay sayidnimadaas. Buugga Ayuub baa ina tuso in malaaʼigaha iyo binuʼaadankaba ay lug ku lahaan karaan caddaynta sayidnimada Yehowah markay xajiyaan qummanaantooda.
Wadaag Wadaag Ayuub Daacadnimadiisii Wuu Xajiyay